Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ibhinqa elifuna ukufihla iminyaka yakhe inika intamo, apho "iindandatho zeminyaka" ziphakama, njengeemithi. Ukunyamekela ngoko ngesikhumba sentamo kufuneka uqale kwangaphambili, ukususela kwiminyaka engama-25. Ukuba ibhinqa ifunda ukuba intamo iyafana, idinga ukunakekelwa, inxalenye yomzimba, ngathi, ubuso, ngoko ke kuyimpumelelo! Musa ukulibala ukuba intamo ifuna ukunakwa kwaye, kunjalo, uyakhathalela. Ngako oko, namhlanje siza kuthetha ngokunyamekela kwesikhumba sentamo.
Ukunyamekela ngokufanelekileyo le nxalenye yomzimba kubandakanya inani leengcebiso eziza kunceda ukugcina intanyeni enhle entle kwaye iphilile. Ngentsasa kufuneka uhlanjululwe isikhumba ngamanzi apholileyo. Kucetyiswa ukuba uqondise ishavu entanyeni. Xa ugqiba unyango lwamanzi, qiniseka ukuphatha intanyeni ngetoni ehambisana nolunye uhlobo lwesikhumba, ungayifaka indawo yerayisi yekhukhamba. Emva koko kufuneka ufake isicelo esikhanyeni ngokukrakra lula, ehlotyeni kufuneka kube yimveliso enefayile ye-UV.
Xa ususa i-makeup ngokuhlwa, ungalibali ngesikhumba sentamo yakho. Thatha i-cotton pad bese ususe ukungcola entanyeni, eqokelele yonke imini ngobisi okanye ezinye iindlela zokususa i-makeup. Ngendlela, iimveliso ezinjalo ziveliswa ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni kunye nesikhumba sentamo. Kodwa ngokubhekiselele kuma-creams oyisebenzisayo ubuso, abafaki entanyeni.
Isiphumo siza kuzisa kuphela ukhilimu owenziwe kwintamo kunye ne-décolleté zone. Le mali iveliswa kakhulu ngabakhiqizi baseFransi, iSpanishi nabaseSwitzerland emkhakheni weeyeza eziza kukhathalela i-salon. Kodwa nayiphi na isitoreji okanye i-salon inako ukukunika ithuluzi elikhethekileyo entanyeni nasezindaweni zokukhupha, onokuzifaka yona ekhaya. Abavelisi baseRashiya baphinda bakhiqize iimveliso eziyinkxalabo kwesikhumba
Xa uthengela ukhilimu, jonga ulwakhiwo kwaye ukhethe enye equka i-collagen. Xa uneminyaka yobudala, i-collagen iqala ukuveliswa ngaphantsi, ngoko isikhumba sidinga ukunyusa okongeziweyo. Kuphela kuphela iprotheni iyakwazi "ukukhupha" isikhumba esikhuphayo, ukuphelisa intsimbi elukhuni entanyeni, kunokufihla "iminyaka eyongezelelweyo". Ukugqithisa amabala okudala, udinga i-agent ye-bleaching ekhethekileyo kwijisi lemon kunye nesisombululo se-hydrogen peroxide (3%). Kwiveki nganye, kufuneka senze imaski yolusu entanyeni kwaye, ngokuqinisekileyo, ukukhawuleza. Ukutshiza kunye nemaski zilungele ukulungiswa ngokuhlwa emva kweyonyango. Emva kokuba i-mask okanye i-agent ye-peelling ihlanjwe, kwakhona kuyimfuneko ukunyanga ulusu nge-tonic ukubuyisela ukulinganisela okuqhelekileyo kwe-acid-base-skin yethu, ephazamiseke ngokuhlamba. Kwaye sifake i-cream. Ukuze ungalulali ulusu phantsi kwezi nkqubo, zonke iindlela kufuneka zisetyenziswe ngokunyanzeliswa okuchanekileyo kwizinto ezibizwa ngokuba yi-massage lines: ukusuka kwinqanaba, kwimeko, entanyeni, emacaleni. Kwakhona kufuneka ukhangele indawo yokugweba.
Ngendlela, iifrimu kunye neemaski zinokulungiswa ekhaya.
Ukunyamekelwa kwesikhumba ngamaski kunye neekram.
I-mask mask "Inondlo". Hlanganisa i-yolk kunye ne-spoonful of honey. Sifaka ioli (umnquma) kunye nomgubo, ukwenzela ukuba loo mveliso ingafaki, kwaye kwakulungele ukuyisebenzisa. Sebenzisa umgubo ococekileyo we-rye, apho kukho ii-vitamin ezininzi. Sifaka umxube entanyeni size siphumule. Sihlamba yonke into ngamanzi (mhlawumbi ifudumele).
Mask "Iipatato". Siphakamisa amazambane atshisayo, kongeza i-yolk kunye ne-spoon yobusi, inani elifanayo leoli (umnqumo kunye ne-glycerin). Faka isicelo somxube kwesikhumba malunga nemizuzu engama-20. Ungayisebenzisa le mveliso esikhumbeni, kwaye ungasebenzisa i-gauze uze wenze into enjengeenkomfa.
Ngokubanzi kakuhle entanyeni yimaski eneparafini. Isetyenziswe ekhaya kwimizuzu emibini ngeveki. Ikhosi epheleleyo i-masks eyi-15. Ngoko:
Mask "IParafini". Ukusebenzisa ibhedi yamanzi, ukutshisa iparfini (izityu). Iqondo lokushisa kufuneka libe ngama-degree angama-50. Ukusebenzisa ibrashi, sebenzisa i-parafini elukhunjini entanyeni kunye nobuncinci obude malunga nemizuzu engama-20. Susa loo mveliso nge-spatula yezokwelapha. Ukuze ugweme ukutshisa, kufuneka wenze uvavanyo ngaphambi kokufaka isicelo: gweba iparafini emva kwesandla. Ukuba iparafini ayitshisi isandla, ngoko kunokwenzeka ukusebenzisa i-ejenti ngokulula kunye nasesikhumba sentamo. Ukuba ulusu lumanzi okanye luyi-sweaty, imaski ayikwazi ukuyenza. Emva kwenkqubo, musa ukuphuma ngaphandle malunga nemizuzu engama-20.
Ukuba unomkhuhlane wentamo eyomileyo, unokulungisa isilungiso kunye neoli yegesi yengqolowa.
Abahlali bamazwe amaninzi balondoloza ithoni yekhumba ngoncedo lwe-sauerkraut, ngelixa libekwe ebusweni, nangentsimbi, nasentanyeni.
Ikhumba elinamafutha entanyeni entanyeni kakuhle kwaye londla imaski ngemvubelo.
Mask "Iigwele". Thatha iipunipoli ezimbini zebisi (ezifudumele) kwaye uphese amagremu evuvu elishumi. Nama-drops ama-6 wejusi kwi-lemon kunye neqanda elilodwa. Ukwenza umthamo we-slurry, engeza isitatshi esincane okanye umgubo (rye). Isixhobo esinjalo sisetyenziswe entanyeni kunye noqweqwe oluncinci.
I-soft softens and the moisturizes the skin, ngakumbi i-fatty, i-milk-milk products.
Mask "Oatmeal-kefir". Thatha iipuni ezimbini zomgubo (oatmeal) okanye i-oatmeal e-milit, exutywe ne-kefir (yogurt), sifezekisa ukufana okufanayo. Kwisisombululo unokongeza i-parsley okanye imifuno ye-plantain.
Mask "Vitamin". Eli lungiso lusizo ngakumbi ebusika. Kwintliziyo yesixhobo, iinqatyiweyo ezigayiweyo ngokukhawuleza. Unika isikhumba nge-vitamin A. Ukuze ufumane amavithamini ngokugcwele, kufuneka udibanise ioli, unokwanda kwemifuno, eyinkokheli ye-vitamin E, okanye unokongeza ukhilimu omuncu. Ukwenza ukwanda komkhiqizo - faka umgubo kwimaski (rye).
I-Mask "Ikhukhamba". Gubha ngokukhawuleza ikhukhamba, yiphonsa ijusi kwi-lemon, faka ubusi obancinci kwaye udibanise zonke izithako. Uluhlu oluqingqileyo lwenkunkuma lusetyenziswa kwesikhumba sentamo. Oku kuya kunceda ukuphucula nokucoca ulusu. Inyosi inokuthi ithathe indawo yesoyile (umnquma), kule meko iya kuba sisixhobo esihle kakhulu solu hlobo lolusu.
Iimali kufuneka zisetyenziswe kwaye zivunyelwe ukuma imizuzu engama-20. Gcoba ngokukhethekileyo ngamanzi apholileyo. Nge-agent edibeneyo, kungcono ukulala phantsi ukwenzela ukuba izixhobo ezixhamlayo zithandeke ngakumbi. Ukulungisa umphumo, kuyimfuneko ukusula ulusu ngeqhwa ekuseni.
Unokumisa i-decoction ye-chamomile okanye i-mint, okanye i-parsley, okanye i-limes. Unokusebenzisa amaqabunga e-birch, kwaye unokwenza i-ice kwi-infusions yeentlobo ezininzi zeengcawa.
Umqubu wokuzihlamba ekhaya.
Unokuzihlalisa i-skin entanyeni. Qalisa ngokunyuka kwee-stroking kwimimandla engasemva kunye neyasemva. Ummandla ophezulu uhluthwe ngeminwe, ngaphambi kokuvalela. Okokuqala kuyenziwa ngesandla esinye, ke okwesibini. Kufuneka uqale, malunga ne-vertebra yesi-7. Ummandla wecala womsila uphawulwe ngeminwe epholileyo, uholele. Intamo ephezulu iqhutywe kuyo yonke iminwe yeminwe, iwaqondise ukusuka kwindlebe yangasekhohlo ukuya ngasekunene nakwezinye. Ngaphantsi entanyeni ngokukhawuleza ukubetha umva weminwe, ngaphandle kwesiqwenga (basebenza ngezandla zombini). Iimvume ziphinda, phantse, amaxesha angama-20. Awudingi ukuhlalisa phambi kwentamo, kuba i-thyroid gland (i-thyroid gland) ilapha.
Ubungcali beplastiki njengobungakanani bemfashini
Iibhatyi zeziqhamo ezintsha
I-liposculpture AQP - iteknoloji ekhethekileyo yokulungiswa kwemifanekiso
Indlela yokunyamekela kakuhle umzimba ekhaya?
Umsele wamanzi e-lymphatic ekhaya
Ikhofi kunye necokoti kwi-cosmetology
Indlela yokukhetha umntanakho ngomntwana?
Imisiseko Yempilo Yentsapho Yakho
USergei Bezrukov kunye nesithandwa esitsha esasilandelwa ngabapapasho
Isikolo sabazali abangabantwana
Xa Usuku loLutsha ngo-2016. Imicimbi, imincintiswano, iinkqubo zoSuku loLutsha 2016 eRashiya
Ukuqatshelwa ngokufanelekileyo ngothando
I-Spaghetti ene-shrimps kunye nemifuno
Ukhilimu wesawoti ngokukhawuleza
Izifuba ezinkukhu ezinamaTaliyane
Umzekelo wokushiya: ukuzinza kwesisindo
Senza i-Cinnabon (CINNABON) ekhaya: zokupheka kunye nezithombe